Niafara Tamin’ny Herisetra Sy Fisamborana Ny Hetsika Fifanorohana Tany India · Global Voices teny Malagasy
Niafara Tamin'ny Herisetra Sy Fisamborana Ny Hetsika Fifanorohana Tany India
Voadika ny 17 Novambra 2014 17:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, srpski, polski, Español, English
Nifanoroka teo anoloan'ny kameran'ny TV ireo mpikatroka mafana fo, ka nahatonga korontana niaraka tamin'ireo mpandray anjara mpitahiry ny fomban-drazana izany, tanatinà fandaharana fitafàna amin'ny TV, tao amin'ny fantsona Mathrubhumi amin'ny fiteny Malayalam (tsindrio raha hijery ny lahatsary)
Olona am-polony no nosamborina nandritra ny hetsi-panoherana iray nokarakaraina tao amin'ny Facebook, tany amin'ny fanjakan'i Kerala ao India, noho ny fanaovana fanamby amin'ny fiadonadon'ireo mpitahiry ny fomban-drazana manoloana ny fifamihinana sy ny fifanorohana imasom-bahoaka.
Ilay hetsika “Kiss of Love (Oroky ny Fitiavana)”, ataon'ireo vondrona avy any amin'ny elatra havanana izay milaza ho mitsangana hanohitra ny “fifehezana ara-môraly”, dia nahavory mpanohitra an-jatony ny Alahady 2 Novambra 2014, teo imoron'ny tanànan'i Kochi, tany amin'ny fanjakan'i Kerala ao India, ary nanohitra ny fandraran'ny mpitandro filaminana. Nifanjevo tamin'ireo mpikambana mpitahiry ny fomban-drazana avy amin'ny elatry ny mpianatra ao anatin'ireo antoko pôlitika izy ireo, izay tsy namela azy ireo hahatratra ny toerana nokasainy haleha. Tsy ela akory dia manodidina ny 50 tamin'ireo mpanohitra no nosamborin'ny mpitandro filaminana, tao anatin'izany ireo mpikarakara, izay nolazaina fa saika hanakorontana ny fandriam-pahalemana.
Nisy vondron'ireo mpanao fihetsiketsehana nanapaka ny fefy nataon'ny mpitandro filaminana ary nifanoroka teo imasom-bahoaka. Vahoaka maro no niandry teo mba hijery ilay hetsi-panoherana.
Nanaparitaka an-keriny ireo mpanohitra ny mpitandro filaminana tamin'ny fampiasàna tsifotra dipoavatra sy lathi (rotsan-kazo) misy herinaratra. Tsy ela dia nipoaka ny tao anatin'ny Tontolon'ny Twitter (maro ireo nampiasa ny tenifototra #KissOfLove):
The ‘kiss of love’ in #kochi turned violent as cops used lathi charge and made arrests. #kissoflove http://t.co/OyVec2ZGKL
Nivadika ho herisetra ilay hetsika ‘kiss of love’ tany #kochi raha nampiasa lathi misy herinaratra ny mpitandro filaminana sady nanao fisamborana.
Hetsika “Kiss of Love” tany Keralà. Ao anatin'ilay fiaran'ny mpitandro filaminana, voasambotr'izy ireo daholo ny mpanao fihetsiketsehana rehetra.
Ireo vahoaka nanohana ilay hetsika #Kissoflove izay nahavita nifanoroka.
Aty Keralà aho, nosamborina ireo olona noho ny fifanorohany. Ankina aho ka tsy afaka na ny hanao tsikera maneso momba izany akory aza.
Raisina ho zavatra mamoafady eo amin'ireo fiarahamonina Indiana ny fampisehoana ny fifankatiavana imasom-bahoaka efa hatry ny ela. Na anatin'ny horonantsarin'ny Bollywood aza, noraisina ho hetsi-panovàna ny fifanorohana, na dia mihamiova aza ny fironana ankehitriny.
Saingy tsy mbola eken'ny rehetra ny fifanorohana sy fifampisakambinana imasom-bahoaka any India. Ny 23 Oktobra, nanao tatitra nahitàna sarinà tanora mpifankatia nifanoroka sy nifamihina tany anatin'ireo toerana fialàna hetaheta sy toerana fisakafoana maro tany amin'ny tanànan'i Kozhikode, avaratr'i Kerala, ny fantsona iray mpitati-baovao amin'ny teny Malayalam, izay an'ny antoko pôlitikan'ny Kongresy Nasiônaly Indiana, ary nametaka izany ho “hetsika tsy fampiseho masoandro.” Nihantsy olona maro hanosihosy ny toerana fialàna hetaheta any Kozhikode izany, izay voalaza ho mpikambana ao amin'ny Bharatiya Janata Yuva Morcha, elatry ny tanora miaraka amin'ny antoko mpitondra amin'izao fotoana Bharatiya Janata. Nitsikera ny fanehoam-pitiavana imasoam-bahoaka nataon'ireo mpifankatia sasany aloha izy ireo tamin'ny voalohany, ary avy eo namotipotika zavatra.
Ho valin'izany, namorona pejy Facebook ho an'ny “Kiss Of Love” ny vondronà tanora nilaza ny tenany ho “malalaka fisainana”. Efa nahangona mpitia mihoatra ny 69.000 isa moa izany hatreto. Milazalaza ny momba azy izy ao amin'ilay pejy:
Hetsika mahavoasazy ny fifehezana ara-môraly. Miezaka ny hanao izany ny ankamaroan'ireo antoko pôlitika sy ireo fikambanana ara-pinoana. Mifanome tànana ny vondronà tanora, mba hanaporofo amin'ny fiarahamonina fa porofom-pitiavana ny oroka.
Maherin'ny 7.000 ireo mpampiasa Facebook no nanaiky ny fanasàna tao amin'ny Facebook ho an'ilay hetsika “Kiss Of Love”, ny 2 Novambra, any amin'ny Marine Drive any Kochi. Nanamarika ireo mpikarakara fa tsy “fetin'ny oroka” akory io, fa famoriana olona tsy misafidy taona, mba ho fanentanana azy ireo manohitra ny fifehezana ara-môraly.
Tonga dia nahazo fanemorana moa ilay hetsika talohan'ny nanombohany. Notafihinà lehilahy roa ireo mpirotsaka an-tsitrapo raha nampiroborobo ny hetsi-panoherana “Kiss Of Love”. Nandà ny fangatahana fahazoan-dàlana hanao ny hetsika ihany koa ny mpitandro filaminana, na dia nolavina aza ireo fanangonan-tsonia roa natao tany amin'ny Fitsaràna avo mba hanajanonana ilay hetsika.
Ny bitsika manaraka izao dia miresaka momba ny fandaharana iray fitafàna aminà TV, voarakitra andro vitsivitsy kely talohan'izay, nampivondrona ireo mpikatroka mafana fo sy ireo mpitahiry ny fomban-drazana, ao anatin'izany ireo mpikambana anaty antoko politika, hifampiresaka. Nisy fotoana tanatin'io, nanomboka nifanoroka teo anoloan'ny kamerà ireo mpikatroka mafana fo roa, ka nisy fifandonana mahery vaika niainga teo amin'ireo mpandray anjara.
Mananihany koa ity! Niharan'ny hatezeran'i Yuva Morcha Jamaath ireo mpikarakara ny #KissOfLove. Notapahana ilay seho TV
Nanohana ilay hetsika ireo olona tao amin'ny Twitter:
Tsy momba ireo olona manohana ny fifanorohana imasom-bahoaka akory ny #KissofLove, fa hetsi-panoherana milamina, enti-manohitra ireo mpikatroka mafana fo tsy misaina ka mikasa ny hamehy ara-môraly!
Na inona na inona voalaza sy vita, tsara lavitra nóho ireo “Hartals” sy ireo hetsi-panoherana hafa ny #KissOfLove; safidin'ny tsirairay ny fandraisana anjara sy/na ny fanohanana.
Doesn't matter if #KissOfLove has large turnout or not, it has already created the buzz and some awareness too, good job organizers 🙂
Tsy maninona na mahazo mpandray anjara betsaka na tsia ny #KissOfLove, efa nahatonga resabe izany ary nampahafantatra ny maro koa, nahavita soa ireo mpikarakara 🙂
Ny hany fanantenako dia ny mba tsy hijanon'io #KissOfLove io ho hetsi-panentanana fotsiny ihany. Manantena aho fa hihoatra lavitra ny hetsika io. Ho hetsika hitondra fanovàna.
Na eo aza izany, nisy ireo sasany tsy tia ny hevitr'ilay hetsi-panoherana:
Handefa ireo zanany/mpiray tampo aminy, handeha amin'ilay diaben'ny oroka an-kalamanjana ve ireo mpikarakara ny #KissOfLove androany?
Say no to #KissOfLove . Yardstick – whatever you are able to do with ease at home in front of parents, elders, children, etc- do in public.
Manaova “tsia” ny #KissOfLove. Fakafakao tsara ireo zavatra afaka ataonao mora foana any an-trano manoloana ireo ray aman-dreninao, ireo zokinao, ireo zanakao, sy ny sisa- ka ho afaka atao eny imasom-bahoaka.
ABVP Kerala create protective wall against Love Jehadi intrusion in the name of ‘Kiss of Love’ pic.twitter.com/SZJLLsbbtK
Mamorona fiarovana amin'ny mety hitsofohan'ny Fitiavana Jehadi an-tsokosoko amin'ny anarana ‘Kiss Of Love’ ny ABVP Kerala pic.twitter.com/SZJLLsbbtK
Lasa olana any Kerala ilay olana mikasika ny fifehezana ara-môraly, indrindra ho an'ireo vehivavy izay lasibatr'ireny didim-piarahamonina ireny matetika. Namakafaka ny fomba fisainan'ireo lehilahy izay mitsaratsara ny hafa i Shahina KK tao amin'ny gazetikoby “Open” telo taona lasa izay. Nanamafy ny olan'i Kerala ho misy idirany amin'ilay “krizin'ny fifandraisan'ny lahy sy vavy iavahan'i Kerala manokana” ilay mpanoratra, nomarihiny fa tsy avy any amin'ireo vondron'ny elatra havanana daholo akory ireo lehilahy izay mifehy ara-môraly, saingy kosa afaka mandrakotra tanteraka ny endriky ny pôlitika:
Toa diso miasa saina loatra amin'ny ataon'ireo vehivavy ny lehilahy any Kerala, ny fataony imasom-bahoaka — ny olona iarahany, ny fomba ataony amin'izany, ary ny fotoana. Toa lasa heloka mihitsy any amin'io firenena io izany hoe latsa-pitiavana izany ankehitriny. Efa voafafy fanafody mihitsy ireo toerana natao ho an'ny daholobe, raha azo lazaina toy izany, mba hiarovana ny fiarahamonina amin'ireo loza tahaka ny fanehoam-pitiavana imasom-bahoaka. Mety ho voatohitohin'ireo olona mpandalo ny mpifankatia miara-mipetraka eny amin'ny zaridaina na eny amoron-dranomasina, manao fanamianà mpitandro filaminana ny sasany amin'izy ireny. Mandritra izany fotoana izany, tafakatra amin'ny ambaratonga ambony tena mbola tsy fahita mihitsy hatrizay ny tranganà fandratràna ara-nofo, ny famiraviràna sy ny fanolanana.
Ilay hetsika “Kiss Of Love” dia mampahatsiahy ny hetsika “Pink Chaddi ” (Akanjo Mavokely) tany Mangalore, ao anatin'ny fanjakan'i Karnataka mpifanolo-bodirindrina aminy, izay tamin'ny andron'ny mpifankatia ny taona 2009 dia vahoaka an-jatony no nandefa atinakanjo mavokely tany amin'ny biraon'ny vondron'ny elatra havanana “Sree Ram Sena”, izay nandrahona vehivavy maromaro tanatinà toerana fisotroana zava-pisotro misy alikaola noho ny ezaka fifehezana ara-môraly.
Ny sisa mila fantarina dia ny hoe rahoviana no hanaiky ny fifanorohana eny imasom-bahoaka ny kolontsaina Indiana.
Miaraka amin'ny tatitra fanampiny avy amin'i Inji Pennu.